Ahoana ny fomba hampandehanana na hampiatoana ny fanavaozana mandeha ho azy ny fampiharana ao Mojave | Avy amin'ny mac aho
Araka ny efa fantatrao angamba, tamin'ny fahatongavan'i macOS Mojave dia fanovana sy fanatsarana marobe no natolotra hahafahantsika mifehy tsara kokoa ny solosaina, fa koa Apple dia nanova ny toerana misy ny safidy sasany, raha te-hanangona ireo singa amin'ny fomba tsotra kokoa ho an'ireo mpampiasa vaovao an'ity rafitra fiasa ity, saingy ny zavatra toa ny safidy hampiasana na hanafoanana ny fanavaozana mandeha ho azy avy amin'ny App Store dia takona kely kokoa.
Izany no antony, amin'ity lahatsoratra ity, dia hasehonay aminao ny fomba ahafahanao mampihetsika na manafoana ny safidy mora foana apetraka ho azy ny fanavaozana ny app avy amin'ny App Store amin'ny Mac-nao.
Alefaso na alao ny fanavaozana ny fampiharana mandeha ho azy avy amin'ny App Store amin'ny macOS Mojave
Araka ny efa nolazainay, miaraka amin'ny macOS io safidy io dia nanova toerana, nanomboka napetrak'izy ireo miaraka amin'ireo safidy hanavao izany, izay nanova toerana ihany koa izy ireo, hatramin'ny taloha dia tao anatin'ny Mac App Store ihany izy ireo. Ataovy izany, raha te hanova ny fanavaozana ny rindranasa ao amin'ny Mac ianao, zavatra mety ho tonga mora raisina raha toa ka tsy mila vaovao ianao, na sao ela loatra dia avelanao hanokatra fampiharana rehefa manavao raha manana solosaina tsy misy kapila mafy SSD ianao dia azonao atao ny manaraka ireo dingana etsy ambany:
Mandehana any rafitra rafitra amin'ny Mac-nao.
Ao amin'ny menio lehibe miseho, safidio ny safidy antsoina "Fanavaozana ny lozisialy".
Ankehitriny, hisy boaty kely hiseho ao izay hanondroana raha misy fanavaozana macOS azonao atao, na raha tsia. Eny, eo amin'ny farany ambany dia tsy maintsy tsindrio ny bokotra nantsoina "Advanced…".
Hahazo ny fikirakirana fanavaozana macOS ianao, amin'ny toerana tokony hisy azy jereo ny safidy "Mametraka fanavaozana ny app avy amin'ny App Store", ary ampandehano na esory izy araky ny safidinao.
Tsindrio ny bokotra "OK" hamonjy ireo fanovana ary handeha.
Vantany vao vitanao izany, tokony efa manomboka manaraka ny fanamboarana ny Mac anao napetrakao, ary na dia apetrakao amin'ny alàlan'ny fametrahana macOS Mojave aza dia safidy iray azo ampandehanana, raha efa notanterahinao izany ary mila izany amin'ny ho avy dia azonao atao ny mamerina azy io tsy misy olana isaky ny tianao, miverina amin'ity faritra ity ihany .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Mojave » Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha na manafoana ny fanavaozana ny fampiharana mandeha ho azy ao amin'ny macOS Mojave
Saingy mihatra amin'ny fanavaozana ny fiarovana ny rafitra koa izany?
ny safidy "fanavaozana ny lozisialy" dia tsy miseho amin'ny mac-ko, tsy ao anaty "preferences system" io, ary tsy afaka manavao ny fomba fanavaozana ny MAC-nao aho
Ao amin'ny mac-ko ny safidy "fanavaozana ny lozisialy" tsy miseho, tsy ao anaty "safidin'ny rafitra", ary tsy afaka manavao ny fomba fanavaozana ny MAC aho manana ny MAC PRO 2012
Tomb Raider: tsingerintaona, misy fihenam-bidy mahaliana ihany
Zarao amin'ny olon-drehetra ny sarinao nampiantranoina amin'ny Photos for macOS